LEGO.com ရှိအရာအားလုံးတွင်ယခု VIP အမှတ်နှစ်ဆရနိုင်သည်
11 / 10 / 2021 11 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 211 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၇၆ Colosseum, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု, Creator Expert, VIP အမှတ်နှစ်ချက်, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Star Wars, Lego စူပါမာရီယို, Lego VIP, LEGO.com, စျေးဝယ်, Star Wars, စူပါမာရီယို, အဆိုပါ LEGO Group, VIP, VIP ဆုများ
နောက်ဆုံးပေါ် Lego နှစ်ဆ VIP အမှတ်ပရိုမိုရှင်းသည်ယခုအွန်လိုင်းနှင့်စျေး ၀ ယ်စတိုးတွင်တွေ့နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးထိရောက်သောလျှော့စျေးကိုပေးသည် Lego အဖွဲ့၏အကြီးဆုံးအစုံဖြစ်သည်။
နှစ်ဆ VIP အမှတ်များသည်အနာဂတ် ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်သုံးစွဲရန်ဆုလာဘ်ဘောက်များတွင် ၁၀% ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။ Lego အဖွဲ့၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်နှင့်တိုက်ရိုက်စားသုံးသူများအတွက်သီးသန့်စျေး ၀ န်းကျင်တွင်အကောင်းဆုံးလျှော့စျေးဖြစ်သည်။
အဲဒီအထဲမှာအကြိုက်ဆုံးတွေရှိပါတယ် ၁၀၂၇၆ Colosseum (ပြန်လည်သုံးသပ်), 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့်အသစ်ထွက်သည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship (ပြန်လည်သုံးသပ်လျှော့စျေးဘောက်ချာများနှင့်သီးသန့်ဆုလာဘ်များအတွက်သုံးရန်သင်အမှတ် back ၄၅ / £ ၃၇ / £ ၃၂ နှင့်ညီမျှသောပိုက်ကွန်ကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။
၎င်းသည်အချို့ကိုဖမ်းယူရန်အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်သည် Lego အဖွဲ့၏မကြာသေးမီကပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုများအပါအ ၀ င် ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု (ပြန်လည်သုံးသပ်).
သင်မပါဝင်ရသေးလျှင် Lego VIP အစီအစဉ်မှတဆင့်နှိပ်ပါ LEGO.com ဒီနေ့ပဲစာရင်းပေးသွင်းပါ၊ အသင်း ၀ င်ဖြစ်လာရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များသို့စောစောစီးစီးဝင်ရောက်ခွင့်၊ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်များသို့ ၀ င်ခွင့်နှင့်သီးသန့် VIP ဆုလာဘ်များရယူနိုင်ခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
လက်ရှိနှစ်ဆ VIP အမှတ်ပရိုမိုရှင်းသည်အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်အထိဆက်ရှိနေမည်။ ထိုအလုပ်ကိုပံ့ပိုးရန်စဉ်းစားပါ Brick Fanatics ငါတို့ကတဆင့်ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးလုပ်တယ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← နေ့၏အုတ်ပုံ: The Nocturnal Kitchen
၂၀၂၁ မှာ LEGO Harry Potter အတွက်ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုလာဖို့ရှိသေးတယ် →